» ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन महसुल विवादः कसरी तिर्लान व्यवसायीले १५ अर्ब ?
ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन महसुल विवादः कसरी तिर्लान व्यवसायीले १५ अर्ब ?
२०७८ श्रावण ५, मंगलवार २१:१४
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद लामो समयदेखि कायम छ । उद्योगी व्यवसायी भन्छन् – हामीले प्रयोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ – बिजुली प्रयोग गरेपछि महसुल तिर्नुपर्छ । तिर्दिन भन्न पाइँदैन ।
प्राधिकरण उठाउन खोज्ने, व्यवसायी तिर्न नमान्ने अवस्था लामो समयदेखि कायम छ । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाखमा नै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल तत्काल उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । विवरणअनुसार त्यस्तो महसुल १५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
विवादका कारण महसुल उठाउन नसकेको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । बुटवल, भैरहवाका व्यवसायीले त महसुल नतिर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा सो विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ । कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ती निकायले पनि प्राधिकरणलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न भनेको अवस्था छ ।
सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समिति सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी सो विषयमा छानबिन गरेको थियो । समितिको २०७६ साउन ५ को बैठकले छानबिन समिति गठन गरी लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसद सूर्यप्रसाद पाठक, पार्वतीकुमारी विसंन्खे, तेजुलाल चौधरी र प्रदीप यादव सदस्य थिए ।
विसं २०७२ साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महसुल असुलीको निर्णय भइसकेको छ । मुद्दा मामिलामा गएका उद्योगी व्यवसायीले पनि बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३ औँ र २०७३ असार १६ को १०८ औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार प्राधिकरणबाट विद्युत् लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्तासमेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको छ । सोही ऐनको दफा १७९४० ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत् महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी व्यवस्था गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।
टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन उपयुक्त हुने व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा २४ सैँ घण्टा बिजुली लिएको र खपत गरेको भन्ने यकिन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री भुसाल ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासङ्घले राखेका विषयमा आफूले कानूनी/विधि, प्रक्रिया समेत बुझेर निर्णय लिने बताउछिन् । उनले महसुलको विषयमा आफूले आवश्यक मात्रामा अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिने उल्लेख गरिन् । उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने बताइन् । रासस